ဒီပိုစ့်လေး ကို သူငယ် ချင်း၊မိတ်ဆွေ သိအောင် ဂရုတွေမှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊မက်စင်ဂျာ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊လိုင်းပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှဲပေးလို့ရမလားခင်ဗျား – Shwewiki.com
ဒီပိုစ့်လေး ကို သူငယ် ချင်း၊မိတ်ဆွေ သိအောင် ဂရုတွေမှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊မက်စင်ဂျာ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊လိုင်းပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှဲပေးလို့ရမလားခင်ဗျား
မကြာခင်မှာ ပဲ သစ်သီးတွေ လိုင်လိုင်ပေါတဲ့ ရာသီကိုရောက်တော့မှာပါ… ဥပမာ သရက်သီး ဒူးရင်းသီး ကနစိုသီး ကြက်မောက်သီး မင်းကွပ်သီး ပိန္နဲသီး အစရှိသဖြင့်ပေါ့….
အဲဒီအသီးတွေကို စားပြီးတဲ့အခါ သစ်စေ့လေးတွေကို အမိုက်တွေနဲ့အတူ လွင့်မပစ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ.. အဲဒီအစ့လေးတွေကို ရေပြောင်အောင်ဆေးပြီး အခြောက်ခံပေးထားပါ.. ကောင်းစွာ ခြောက်သွေ့သွားတဲ့အချိန် သတင်းစာ စက္ကူလေးနဲ့ ထုပ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကားထဲမှာ သိမ်းထားပေးပါခင်ဗျ….
ခရီးသွားရင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြို့အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ်…. ကျေးလက်လမ်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်… ကားလမ်းဘေးက မြေကွက်လပ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်…. အဲဒီနေရာတွေကို ရောက်တဲ့အခါမှာ… သင်သိမ်းထားတဲ့ သစ်စေ့လေးတွေကို လွင့်ပစ်ပေးပါ….
အဲဒီစေ့လေးတွေဟာ မိုးရာသီရောက်တဲ့ခါမှာ အလွယ်တကူ ရှင်သန်လာနိုင်ပါတယ်…
မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ နှစ်စဉ်မိုးရာသီတိုင်းမှာ ဒီနည်းသုံးပြီး အပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးစိမ်းလန်းလာရေး ရည်မှန်းချက်ဟာ အောင်မြင်လာမှာပါ…
ထိုင်းအစိုးရကတော့ ဒီနည်းနဲ့ အပင်တွေစိုက်ပျိုးကြဖို့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက လှုံ့ဆော်နေခဲ့တာပါ…
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ခရိုင်အရာရှိတွေဟာ သူတို့ဒေသတွေမှာ ဒီနည်းကို စိတ်အားထက်သန်သန်ပဲ ဟောပြောစည်းရုံးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက ခရိုင်တွေက ( မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဒေသ ) တောတွေမှာ ဒီနည်းနဲ့ သစ်သီးပင်တွေဟာ တိုးပွားလို့လာနေပါတယ်…
ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်စေမဲ့ ဒီနည်းလမ်းလေးကို အသုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ် မျိုးဆက်တွေအတွက် သစ်ပင်တွေ အလျှံပယ် ထားခဲ့ကြရအောင်လားဗျာ….
Dear Penro Tarlac Page က ရေးထားတာလေးကို ဆီလျှော်အာင် ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ…
မကွာခငျမှာ ပဲ သဈသီးတှေ လိုငျလိုငျပေါတဲ့ ရာသီကိုရောကျတော့မှာပါ… ဥပမာ သရကျသီး ဒူးရငျးသီး ကနစိုသီး ကွကျမောကျသီး မငျးကှပျသီး ပိန်နဲသီး အစရှိသဖွငျ့ပေါ့….
အဲဒီအသီးတှကေို စားပွီးတဲ့အခါ သဈစလေ့ေးတှကေို အမိုကျတှနေဲ့အတူ လှငျ့မပဈကွပါနဲ့ခငျဗြာ.. အဲဒီအစ့လေးတှကေို ရပွေောငျအောငျဆေးပွီး အခွောကျခံပေးထားပါ.. ကောငျးစှာ ခွောကျသှသှေ့ားတဲ့အခြိနျ သတငျးစာ စက်ကူလေးနဲ့ ထုပျပွီး မိတျဆှတေို့ရဲ့ ကားထဲမှာ သိမျးထားပေးပါခငျဗြ….
ခရီးသှားရငျးနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ မွို့အပွငျရောကျတဲ့အခါမှာ ဖွဈဖွဈ…. ကြေးလကျလမျးတှမှောပဲဖွဈဖွဈ… ကားလမျးဘေးက မွကှေကျလပျတှမှောပဲဖွဈဖွဈ…. အဲဒီနရောတှကေို ရောကျတဲ့အခါမှာ… သငျသိမျးထားတဲ့ သဈစလေ့ေးတှကေို လှငျ့ပဈပေးပါ….
အဲဒီစလေ့ေးတှဟော မိုးရာသီရောကျတဲ့ခါမှာ အလှယျတကူ ရှငျသနျလာနိုငျပါတယျ…
မိတျဆှေ အနနေဲ့ နှဈစဉျမိုးရာသီတိုငျးမှာ ဒီနညျးသုံးပွီး အပငျလေးတှေ စိုကျပြိုးပေးမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ နထေိုငျရာ ကမ်ဘာကွီးစိမျးလနျးလာရေး ရညျမှနျးခကျြဟာ အောငျမွငျလာမှာပါ…
ထိုငျးအစိုးရကတော့ ဒီနညျးနဲ့ အပငျတှစေိုကျပြိုးကွဖို့ သူတို့နိုငျငံသားတှကေို လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျကတညျးက လှုံ့ဆျောနခေဲ့တာပါ…
ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ခရိုငျအရာရှိတှဟော သူတို့ဒသေတှမှော ဒီနညျးကို စိတျအားထကျသနျသနျပဲ ဟောပွောစညျးရုံးခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့ကွပါတယျ။ ထိုငျးနိုငျငံ မွောကျပိုငျးက ခရိုငျတှကေ ( မွနျမာနိုငျငံ ရှမျးပွညျနဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ဒသေ ) တောတှမှော ဒီနညျးနဲ့ သဈသီးပငျတှဟော တိုးပှားလို့လာနပေါတယျ…
ရိုးရှငျးပွီး ထိရောကျစမေဲ့ ဒီနညျးလမျးလေးကို အသုံးပွီး ကြှနျတျောတို့ အနာဂတျ မြိုးဆကျတှအေတှကျ သဈပငျတှေ အလြှံပယျ ထားခဲ့ကွရအောငျလားဗြာ….
Dear Penro Tarlac Page က ရေးထားတာလေးကို ဆီလြှျောအာငျ ဘာသာပွနျပေးထားတာပါ…
ချမ်းသာ ချင်တဲ့ သူတိုင်း သိထားသင့် တဲ့ သူဌေးတွေ့ရဲ့ ငွေ သုံးနည်း ( ၁၂ ) နည်း